Imbali yentlanzi yeKoi | Ngeentlanzi
Akhawunti ilivo ukuba amawaka eminyaka eyadlulayo, idolophu Iintlanzi zeKoi o ikhaphethi Wayequbha kuMlambo oMthubi wase China. Ezo ntlanzi zazikhazimla kwilanga njengezinto zokwenene.
Bebequbha ngokuzolileyo de bafumana ingxangxasi. Uninzi lwazo aluvumanga ukuzama ukunyuka ngenxa yokoyika ukuphulukana nobuhle babo xa benikwa ithuba lokuba xa betsiba baya kubetha amatye, ke ngoko bagqibe kwelokuba bahambe nomsinga ngaphandle kokubeka emngciphekweni ukufikelela kwiinjongo zabo. Nangona kunjalo, elinye iqela elikhaliphileyo lazama ukuyizama ukuze lazi eyona nto iphambili, ukutsiba engxangxasi ngaphandle kokuma, Ngaphandle kokuncama.
Le nyaniso yamangalisa ezinye iidemon ezikufutshane nabo ababeyihleka umlo owawusenziwa ziiKois kwiingxangxasi. Baye bonyusa ukuphakama kokuwa ngemilingo yabo engendawo ukuze bahleke ngakumbi kwaye bakwenze kube nzima nangakumbi, kodwa nangona kunjalo zange banikezele, de ekugqibeleni omnye wabo wakwazi ukufikelela encotsheni.
Okwalo mzuzu, uthixo wasezulwini wancuma kwaye waguqula njengomvuzo kuye inamba enkulu yegolide. Elo gongqongqo linye lasezulwini lileqa iiperile zobulumko kulo lonke izulu njengomvuzo wemizamo yakhe kunye nesibindi.
Ukususela ngaloo mini, zonke iintlanzi ze-Koi ezinamandla kunye nesibindi ziyakwazi ukufikelela phezulu zijikwa zibe ziidragons zasezulwini. Ukuwa namhlanje kwaziwa njenge 'ISango leNyoka' kunye Iintlanzi zeKoi Ngenxa yamandla abo, ukuxhathisa kunye nokunyamezela, zithathwa njengophawu lokufikelela kwindawo ekuyiwa kuyo, yokoyisa kunye nokuzalisekisa iinjongo ebomini. Umvuzo olingana nokuba yinamba lulonwabo lwethu oluzele bubulumko.
Ezi ntlanzi baphakamisa ulindelo ngobuhle bayo kunye nemvisiswano Yiyo loo nto, ingamangalisi into yokuba behamba nomxholo olungileyo nokhuthazayo njengalowo uxelwe kwimihlathi engaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ilivo leentlanzi zeKoi
Ukuphuhliswa kwentlanzi: amaqanda